दीपक गिरीको प्रश्न – ‘दुई तिहाईको सरकारलाई स्थायी राजधानी घोषणा गर्न कस्ले छेकेको छ ?’ » Farakkon
दीपक गिरीको प्रश्न – ‘दुई तिहाईको सरकारलाई स्थायी राजधानी घोषणा गर्न कस्ले छेकेको छ ?’
उपनिर्वाचनको टिकट जस्ले पाउँछ त्यसलाई जिताउन लागि पर्छु
शनिबार, श्रावण ३२, २०७६ ०८:५७
दाङ, साउन ३२ । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री दीपक गिरीले लामो समय विति सक्दापनि ५ नं. प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा नगरिएको प्रति आपत्ति जनाएका छन् । ‘दुई तिहाइको बहुमतको सरकार छ, किन तागत राख्नु हुन्न निर्णय गर्ने ? के त्यसमा पनि काँग्रेसले छेकेको छ ? दीपक गिरीले छेकेको छ?’– नेता गिरीले भने ।
फरक कोणसंगको सम्वादतमा नेता गिरीले आफुले आफ्नै निर्वाचन लडेको क्षेत्र पुरन्धारामा राजधानी हुनुपर्छ भनेर नभनेको भन्दै नेता गिरीले पूर्वी रुकुमदेखि बर्दिया र नवलपरासी सम्मका जनतालाई पायक पर्ने स्थानमा राजधानी तोकिनु पर्ने बताए ।
हामी जनताको माझमा सिंहदरवार लाँदैछौं भन्छौं त्यो कहाँ हो त ? उनले प्रश्न गरे । दाङको भएको नाताले दाङ राजधानी खोजेको हैन । गाउँ गाउँमा पूर्वी रुकुम,बर्दिया र नवलपरासीको सेन्टर त्यहाँ राजधानी बनाउनु पर्ने उनले स्पष्ट पारे । ‘दाङ जिल्लाको चाहे भालुवाङ होस वा हापुरे मेरो ब्रह्मले हैन विवेकले दाङ नै राजधानी हुनुपर्छ,’ नेता गिरीले भने ।
नेता गिरीले काँग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण र नेकपाका नेता विष्णु पौडेलले बुटवललाई अस्थायी राजधानी राखेको जिकिर गरे । नेकपाका महासचिव पौडेलको नाम लिएपनि उनले काँग्रेस नेता खाँणको नाम भने लिन चाहेनन् ।
शेरबहादुर देउवाले अस्थायी राजधानी बुटवलमा राखेको भन्नु गलत भएको उनले बताए । दाङमा आँफु लगाएत अरु स्थानमा पनि काँग्रेसका नेताहरुले जितेको भए प्रदेश राजधानी दाङ नै तोकिने दाबी गरे । बुटवल र नेपालगञ्ज विकसित भइसकेको हुँदा संघीयताको मर्म अनुरुप त्यहाँ भन्दा अनेत्र राजधानी हुनुपर्ने नेता गिरीको तर्क छ । ‘रुपन्देही पर्यटकिय क्षेत्र हो र नेपालगञ्ज औधोगिक क्षेत्र हो । यसको बीचको दाङ विकासमा पछाडि छ र बीचमा पनि छ । त्यसैले राजधानी दाङ नै हुनुपर्छ,’ नेता गिरीले भने ।
उनले काँग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा वुटवल अस्थायी राजधानी तोकिएपछि तत्कालिन समय बैठक बहिस्कार गरेको बताए । दाङलाई स्थायी राजधानी नबानाउने हो भने संघीयताको औचित्य रहने उनले बताए ।
तुलसीपुरमा उच्च अदालत आँफु र कृष्ण महराले गर्दा आएको बताएका उनले डिआइजी कार्यालय पनि आँफुहरुकै पहलको प्रयास भएको बताए । ‘अब लोकसेवा उतै गयो भन्ने सुन्छु । यि पूर्वाधार हामीले गर्दा आएका हुन । पश्चिम दाङबासीको ताकक म संग थियो । त्यसैले मैले लडेर ल्याउन सके,’ नेता गिरीले भने ।
नेता गिरीले दुई तिहाई बहुमतको सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार कुनैपनि काम गर्न नसकेको बताए । किसानले समयमै मल नपाएको, अस्पताल, स्वास्थ्य, शिक्षाको अवस्था जस्तोको त्यस्तै रहेको र विकासको गतिपनि ठप्प भएको नेता गिरीले बताए । ‘काँग्रेसले जहाँसम्म काम गरेको थियो , त्यो त्यही नेर ठप्प छ । बाटो बनाउँदा बनाउँदै रोकिएका छन् । पुल र सिंचाईको कामपनि त्यस्तै छ । कम्युनिष्टले जनतालाई झुक्काउन सके,’ नेता गिरीले भने ।
युवालाई बरो सजग र अनुसासित भएर अगाडि बढ्न उनले आग्रह गरे । गिरीले भने ‘बढो प्रयोग गर्छन् त्यसमा बच्नु होला।’ उनले उपनिर्वाचनमा जस्लाई पार्टीले टिकट दिन्छ त्यो उम्मेदवारलाई जिताउन आँफु आफ्नो लागि भन्दापनि बढी खटिने बताए । ‘हाम्रो संसदीय वोर्डले टिकट दिन्छ र त्यो टिकट वितरण पछि म आएर थपक्कै दाङमा बस्छु । यसपटक काँग्रेसले जसरीपनि निर्वाचन जित्छ,’ नेता गिरीले भने । तपाँई र गहेन्द्र गिरी गुटले काँग्रेस दाङ विग्रिएको भन्छन् नि ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले आँफु गुटमा नलागेको दाबी गरे । तर उनले गेहेन्द्र गिरीको नाम भने उच्चार नै गर्न चाहेनन् । ‘हेर्नुहोस– एउटा झुन्ड छ त्यो झुन्डलाई काँग्रेस हुन भन्न गाह्रो छ । निर्वाचनमा पैंशा लिएर भोट विरोधीलाई दिनेहरुलाई काँग्रेस भन्न मिल्छ,’ नेता गिरीले प्रश्न गरे ।
काँग्रेसका नेताहौं भन्नेहरु चरम विन्दु भन्दा पनि बढी व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको र विक्रि भएको आरोप लगाए । ‘ निर्वाचनमा उनीहरु प्रयोग भएका छन् । हामीलाई हराउन ठूलो चलखेल भएको छ । ठूलो रकमको खोला बगाइएको छ । त्यो कस्ले कति पाएको छ । भविस्यमा त्यसको लिष्ट आउला नि,’ नेता गिरीले भने ।
उनले आँफु ९÷१० महिनाको अवधिमा मन्त्री हुँदा जिल्लाको लागि धेरै गरेको बताएका उनले तर त्यसको मुल्याङकन जनताले सही रुपमा नगरेको भन्दै चित्त दुखाए । ‘यहाँको बाटा घाटा, पुल पुलेसा कस्ले बनाएको हो । सिंचाईको लागि त्यतिधेरै डिपबोरिङ वा टिपवेल कस्ले बनाएको हो,’ नेता गिरीले भने ।
आँफुलाई निर्वाचनमा हराउन हदै सम्मको बदमासी भएको बताएका नेता गिरीले निर्वाचन हराउन पार्टीका केही दुष्टहरुले लज्जाष्पद र घृणित कार्य गरेको उनले तर्क गरे । ‘म भन्दा दक्ष मान्छे । म भन्दा तगडा मान्छेले मलाई हराएको भए म सन्तुष्ट हुने थिए,’ नेता गिरीले भने ‘ म आजिवन लोकतन्त्रको रक्षाको लागि लडे । जिल्लाको विकासको लागि लागि परे, तर मलाई नै हराउन ठूलो षडेन्त्र भयो।’